एम्बुलेन्सको अभावमा विरामी ज्यान गुमाइरहेका छन्, म कसरी गाडी चढौ ? सुविधा गाडी नलिने नगर उपप्रमुख बसन्ती तामाङ – PathivaraOnline
Home > समाचार > एम्बुलेन्सको अभावमा विरामी ज्यान गुमाइरहेका छन्, म कसरी गाडी चढौ ? सुविधा गाडी नलिने नगर उपप्रमुख बसन्ती तामाङ
काठमाडौं । गाउँमा बिरामी एम्बुलेन्स खरिद गर्नका लागि दक्षिणकाली नगरपालिकाकी उपप्रमुख बसन्ती तामाङले आफ्नो सुविधा गाडी नलिने भएकी छिन् । नगरपालिकाले तामाङलाई सवारी सुविधाका लागि ३० लाख रकम उपलब्ध गराएको थियो ।
तर उनले आफ्नो सवारी सुविधा त्यागेर गाउँका विरामी बोक्ने एम्बुलेन्स खरिद गर्ने निर्णयमा पुगेकी छिन् । सवारी साधनबापत छुट्टयाइएको रकम शिक्षा र स्वास्थ्यमा खर्च गरेकी छिन् ।
‘मेरो सवारी सुविधाका लागि ३० लाख रकम छुट्टयाइएको थियो तर मलाई लिन मन लागेन’ उनले भनिन् ‘एम्बुलेन्स नभएपछि गाउँमा विरामीहरुले ज्यान गुमाइरहेका छन् । सुविधाका गाडी लिनुभन्दा विरामी बोक्ने एक्बुलेन्स किन्न पैसा दिन उपयुक्त ठाने । एम्बुलेन्स खरिदका लागी उनले ५ लाख दिएकी छिन् ।
बहराईनमा यस्तो भयानक घटनाः १० जना नेपाली कामदारकाे यसरी गयो ज्यान!
खुशिको खबर : कतारमा कामको लागि गएका नेपालीका आफन्तका लागी बिना भिसा कतार घुम्ने अवसर